कमजोर व्यवस्थापनमा कम्युनिष्ट सरकार सफल हुन सक्दैन | Nepal Tara - A Complete News Portal
कमजोर व्यवस्थापनमा कम्युनिष्ट सरकार सफल हुन सक्दैन
कतिपय अर्थविद्हरूले नेपालमा विकासका लागि पैसा छ, वदेशीले सहयोग गर्छन् तर हामीले खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेका छैनौं भनिरहन्छन् । बृहत् रूपमा विकासलाई अघि बढाउने, ठूलो मात्रामा उत्पादन र उपयोग गर्न सक्ने क्षेत्रको बृहत् योजनासाथ विकास गर्ने हो भने नेपालमा भएको र नेपालले विश्वबाट पाउने सहयोग अत्यन्तै कम हुन्छ । वर्षेनी छुट्याउने विकास बजेट अत्यन्तै कम छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को विकास बजेट जम्मा ६ खर्ब छ । अर्को, विश्व बैंक, इसियाली विकास बैंक तथा अन्य विकासित राष्ट्रले अतिविपन्न राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने सहयोगभन्दा नेपालले पाउने सहयोग अत्यन्तै थोरै छ । अर्को पक्ष छ, नेपाल अविकसित छ, पूर्वाधार छैन, सबै क्षेत्र ठूलो मात्रामा गरिने उत्पादनका हिसाबले अति अविकसित छ तर न सरकार आफैले छुट्याएको बजेट नै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ न विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग नै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छ ।
। यी सबै अवस्थालाई हेर्दा नेपाल कमजोर अवस्थामा रहिरहनुको मुख्य कारण व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । दोस्रो, छुद्र राजनीति पनि कारकका रूपमा देखिएको छ ।
गरिबी निवारणमा व्यवस्थापनको गम्भीर कमी
नेपालले गरिबी निवारणका कार्यक्रम वर्षेनी अघि सार्ने गरेको छ तर सरकारले तयार गरेका नीति तथा खर्च गरेका बजेटले गरिबी हट्न सकेको छैन । भूकम्पभन्दा पहिले नेपालको गरिबी २५ प्रतिशतबाट घटेको देखाइएको थियो । गरिबी घट्नुमा सरकारको नीति र कार्यव्यवस्थापन कारक नभई बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार मुख्य कारक थियो । वास्तविक गरिबी अहिले त्यसभन्दा धेरै बढी छ । अचम्मलाग्दो कुरा गरिबका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको छ । नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ र बजेट पनि छ भने गरिबसम्म पुग्न नसक्नु गम्भीर व्यवस्थापनको कमी हो । अहिले प्रचार गरिएको गरिबलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उत्थानलाई सरकारले प्रयास गर्ने योजना तुहिने अवस्थामा पुगेको छ । २०७० सालमा संकलन गरिएको गरिबको तथ्यांकमा १५ हजार सरकारी अधिकृत स्तरका कर्मचारी परेको गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।
देशका कतिपय क्षेत्रमा वितरण गरिएको परिचयपत्र धनीका हातमा परेको देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी हुनेहरूले गरिबीको परिचयपत्र पाएका छन् भने अति गरिबले यस्तो परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा यो योजना नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । कार्यक्रम राम्रो उद्देश्य राखेर ल्याइएको भए पनि व्यवस्थापनको गम्भीर त्रुटीका कारण धरापमा परेको देखिएको छ ।
बजेट खर्चमा व्यवस्थापनको कमी
केही वर्षयता सरकारले निर्माण गरेका बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा मात्रै खर्च गरिन सकेको देखिएको छ । यही ६० प्रतिशत पुरयाउन पनि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । असारे बजेट खर्चको ठूलो अंश दुरुपयोग भइरहेको छ । यसरी बजेट लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा जातीय तथा लिंगीय सशक्तीकरण हुन सकेको छैन । सरकारले केही ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरे पनि पर्याप्त बजेट नछुट्याउने, जग्गाको व्यवस्था नगर्ने, सक्षम ठेकेदार कम्पनी छनोट नगर्ने र कामको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नगर्ने देखिएको छ । यसमा व्यवस्थापनको कमजोरी गम्भीर कारक त हो नै छुद्र राजनीति पनि जिम्मेवार देखिएको छ । योजना बनाउने तर बजेट अत्यन्तै कम छुट्याउने, टाठाबाठा मन्त्रीको क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याउने, अरू क्षत्रमा थोरै बजेट छुट्याउने गरिएको छ । यसले सरकारी नीतिलाई स्वतः काम नलाग्ने बनाइदिन्छ र बनाइरहेको पनि छ ।
पुनर्निर्माणमा व्यवस्थापनको कमी
भूकम्प गएको तीन वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बल्ल २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि क्षतिको अध्ययनपछि पुनर्निर्माणमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तीन वर्षमा उक्त बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब ५५ करोड ४० लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारको योजना अनुसार ५ वर्षमा पुनर्निमाण सम्पन्न गरिसक्नपर्ने हो तर आधा समय बितिसक्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्नु सरकारको व्यवस्थापन कस्तो अवस्थामा रहेको मान्ने ? यस्तो अवस्थामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडित ठूलो कठिनाइ खेप्न बाध्य भएका छन् भने राष्ट्रिय सम्पदा वर्षौं पानी र घाममा असरल्ल छाड्दा पूरै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व सम्पदामा सूचीकृत विशेष सम्पदा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् । यसे सरकारी संयन्त्रको कमजोर व्यवस्थापन जिम्मेवार देखिएको छ । अर्को छुद्र राजनीतिका कारण वर्षेनी पुनर्निर्माणका कार्यकारी प्रमुख फेरिने तथा पाटी नेतृत्वका सरकारले आफ्ना अनुकूल व्यक्ति सो पदमा पुरयाउनाले यस्तो अवस्था आएको देखिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यवस्थापन
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक लगानी गरिरहेको छ । शिक्षाका विभिन्न संयन्त्र तयार अरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । ती संयन्त्र अहिले बेकम्मा बन्दै गएका छन् । यसका कारण सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षा झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ । यसले ठूलो संख्याका गरिब नागरिकका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित ह्ँदै गएका छन् । अर्को, मध्यम वर्गको पनि आयको ठूलो हिस्सा खर्च गरेर निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्दा उनीहरूको जीवनस्तर नै कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । यसलमा सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थापनमा रहेको गम्भीर कमजोर कारक रहेको देखिएको छ ।
अर्को, देशभर स्वस्थ्य संस्था भए पनि सरकारले चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसक्ने, उपकरण व्यवस्था गर्न नसक्ने, भएका उपकरण पनि समय–समयमा मर्मत गर्न नसक्ने गरेको देखिएको छ । अझ निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार बजेटको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिएको छैन । यो पनि सरकारी संयन्त्रमा रहेको व्यवस्थापनको कमजोरी हो ।
विकास, सम्पन्नता र व्यवस्थित राष्ट्र निर्माण गर्न कुशल व्यवस्थापन अति आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि विकास र सम्पन्नताका लागि कुशल व्यवस्थापन अति महत्वपूर्ण देखिएको छ । पूर्वी एसियाली राष्ट्रको उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । बीसौं शताब्दीको मध्यतिर आर्थिक अवस्था नेपालकै हाराहारीमा रहेका सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रले स्पष्ट दृष्टिकोण र कुशल व्यवस्थापनले गर्दा विकसित राष्ट्रको स्तरमा उक्लिएका छन् । सिंगापुरलाई लि क्वान युले नेतृत्व लिएपछि उनले व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिए जसले गर्दा सिंगापुरको आर्थिक विकासदेखि व्यवस्थित राष्ट्रको कोटीमा उक्लियो । मलेसिया पनि महाथिर मोहम्मदको कुशल व्यवस्थापनले एउटा औद्योगिक राष्ट्रको कोटीमा उक्लिन सफल भयो । दक्षिण कोरियालाई पनि कुशल व्यवस्थापनले नै अहिलेको विकसित राष्ट्रको कोटीमा उक्लिन सफल भएको हो ।
नेपालको अहिलेको वामपन्थी सरकारले धेरै काम गर्ने बताए पनि व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । अहिले देशका सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहनु र ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गर्न पनि नसक्नु सरकारको कमजोरी देखिएको छ । वामपन्थी सरकारले व्यवस्थापनलाई पुनः मूल्याकन र व्यवस्थापन गर्नतिर कदम चाल्न सुरु गरेको पनि देखिएको छैन । राष्ट्र संघीयतामा गएपछि व्यवस्थापनलाई जुन रूपमा लिनुपर्ने हो त्यसरी लिइएको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्कालको लाभलाई हेरेर योजना अघि सार्ने र त्यसको कार्यान्वयमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
वामपन्थी शासनको मुख्य प्राप्ति नै कुशल व्यवस्थापन हो । कुनै पनि क्षेत्रको कुशल व्यवस्थापनद्वारा तत्काल परिणाम दिनु नै कम्यनिष्टको मुख्य लक्ष हो । यसमा सरकार चुक्यो भने कम्युनिष्ट सिद्धन्त स्वतः कमजोर र काम नलाग्ने हुन्छ । कुशल व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई त्यसै अनुसार तयार गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । यसका साथै सरकारका सबै संयन्त्रको पुनर्मूल्यांकन गर्न गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन २५, १६:३९
ठेकेदार–राजनीतिक नेतृत्व साँठगाँठः नेपालको विकास कता जाला ?
नेपालको शिक्षाः बजेट खर्च नहुने, गुणस्तर खस्कँदै जाने अवस्थाबाट कहिले पार पाउला ?
उपत्यकामा विदयुतीय बस: सार्वजनिक यातायातका रुपमा चल्न सफल होला त?
भक्तपुरमा बसले ठक्कर दिदाँ दुईको मृत्यु
आर्सनलले युक्रेनको भोरसाक्ला एफसीलाई ४–२ गोल अन्तरले हरायो
पाओके एफसीमाथि चेल्सीको कठिन जित
एसिया कपः अफगानिस्तानले बंगलादेशलाई हरायो
सुचनाबिभाग दर्ता नं : १६१३७७/०७३/०७४